Tilmaamaha isku-darka guriga - Xarunta EcoTechnology
Talooyin ku saabsan isku-darka guriga
Bacriminta ayaa ah geedi socod dib loogu isticmaalayo haraagaaga haraaga ah iyo haraaga qashinka si aad uhesho bacrimin. Waa hab fiican oo lagu hagaajiyo caafimaadka daaradaada isla markaana loo yareeyo qadarka qashinka dabiiciga ah ee taga qashinka ama xarunta qashinka-u-tamarta.
Waqtigan xaadirka ah, 50% qashinka aadaya qashinka ayaa ah mid la iskudarsan karo, oo ay kujiraan 60 bilyan oo rodol oo ah cunnooyin khasaaray sanad walba. Markii qashinka haraaga ah lagu tuuro qashinka waxay aakhirka noqdaan goob qashin qubka ah halkaas oo ay ku burburaan si aan karti lahayn, iyagoo qaadaya boosas fara badan isla markaana soo saaraya gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo, oo ka qayb qaata isbedelka cimilada. Marka qalabkan la bacrimiyo, waxaa dib loogu rogaa wax ka beddelka ciidda oo ay ku badan yihiin nafaqooyin qiimo leh oo ka faa'iideysan kara carrada iyo dhirta.
Isku-darka qashinka wuxuu isu rogaa "dahab madow". Compost waa nafaqo-hodan ku ah maadada dabiiciga ee ku baaba'day jiritaanka ogsijiinta (dheef-shiid kiimikaadka). Nidaamkan kala daadsanaanta waxaa loogu yeeraa nafaqeynta, iyadoo laga bilaabayo geeddi socod soo noqnoqoshada iyo ugu dambeyntii looga faa'iideysanayo wareegga nafaqada oo dhan. Guriga dhexdiisa, waxaad u isticmaali kartaa bacriminta dhirta cawska, beerta, ama dhirta guriga.
Waa maxay faa iidooyinka ay leedahay bacriminta?
Waxay kordhisaa walxaha dabiiciga ah ee carrada waxayna ka caawisaa dhismaha qaab dhismeedka xididka dhawaaqa.
Isku dheelitirnaanta pH ee ciidda.
Waxay ka dhigtaa nafaqooyinka ciidda mid si fudud dhirta u heli kara.
Qashinka cuntada ka weeciya qashinka.
Waxay soo jiidataa gooryaanka dhulka, oo loo tixgeliyo "dib u warshadeeyayaasha ugu waaweyn dhulka."
Waxay ka dhigtaa carrada dhoobo hawo hawo leh si ay si fiican u daadin karaan.
Waxay hagaajinaysaa awoodda carrada ciidda u leedahay inay qoyaan qabato kana horjoogsato nabaad guurka.
Waxay sare u qaadeysaa fiitamiinada iyo macdanta ku jirta cuntada lagu beero beerta hodanka ku ah compost.
Waxay yareysaa ku tiirsanaanta Bacriminta ku saleysan batroolka.
Maxaan ubaahanahay si aan u nafaqeeyo?
Isku-darka isku-dhafka ayaa fududahay in lagu sameeyo guriga, wuxuuna yareeyn karaa kharashka ku baxa qashinka oo wuxuu ka faa'iideysan karaa beeraha gurigaaga. Bacriminta caafimaadka leh waxay u baahan tahay afartan cunsur inay wada shaqeeyaan:
Heerkulka: Bakteeriyada ku jirta raashinka compost-ku waxay abuuraan kuleyl markay shaqeynayaan oo ay korayaan. Heerkulka ugu wanaagsan ee bacriminta degdega ah wuxuu ku saabsan yahay 140 ° F bartanka taallo. Si loo ilaaliyo heerkulka wanaagsan, raso compost habboon waa inuu ahaadaa ugu yaraan 3'x3'x3 ′. Waxaad bilaabi kartaa raso yar oo aad dhisi kartaa markaad socoto.
Oksijiin: Aerobic, "oksijiin-jecel" noolaha si deg deg ah oo aan ur lahayn. Haddii raso compost uusan lahayn hawo ku filan, noolaha anaerobic ayaa la wareegi doona urkuna wuu soo bixi doonaa. Ku dhiirrigeli burburka aerobic-ka adigoo rogaya tuubbada markasta oo aad waxyaabo ku darto. Isku qas caleemaha qallalan ama cawska si aad uga niyad jabiso isku-xoqidda ama xoqitaanka.
qoyaanka: Dhammaan noolaha, oo ay ku jiraan kuwa ku jira qashinka compost, waxay u baahan yihiin biyo koritaanka. Rukunka compost ee qallalan ayaa si tartiib ah u burburi doona. Haddii ay aad u qoyan tahay, sahayda oksijiinta ayaa xaddidnaan doonta, iyo kala-goysyada anaerobic ayaa dhici kara. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ku darto biyo ama qalab qalalan ka dib qalalan ama qoyan ee jawiga hawada. Samee "Tijaabinta Tijaabinta" - qalabka bacriminta waa inay ahaadaan kuwo qoyan sida isbuunyada la rujiyay.
Cuntada / Qalabka: Noolaha sameeya shaqada burburka waxay u arkeen qashinkeena inuu yahay cunadooda. Nafleyda microscopic-ka waxay ubaahan yihiin isku-darka kaarboon iyo nitrogen si ay u koraan una tarmaan. Guud ahaan, "cagaar" ama walxaha qoyan waxay ku badan yihiin nitrogen (si dhakhso leh ayey u jajabtaa), halka "bunni", qalabka qalalan ama xaabada leh ay ku badan yihiin kaarboonka (tartiib u burburi). Diyaarso walxaha kahor intaadan galka dhigin adoo goynaya jirridaha, geedaha canabka ah, laamaha waaweyn, cawska ama cawska, ka feker inaad cowska dul mariso caleemaha si aad u yarayso cabirkooda oo had iyo jeer qashinka uga soo qaado qashin kasta oo daarada ah.
Qalab noocee ah ayaan ku ridi karaa bacriminta gurigayga?
Tuulada compost ee ku habboon waxay yeelan doontaa 3: 1 Dheelitirka Kaarboon (bunni) ilaa Nitrogen (cagaar).
Waxyaabaha kaarboonku ku badan yahay waxaa ka mid ah: caleemo qallalan, caws, hay, warqad jarjaran, kartoonno, joornaal, burush, balka, cirbadaha geedaha.
Maaddooyinka hodanka ku ah nitrogen waxaa ka mid ah: haraaga cuntada, goynta cowska, haramaha, ukunta ukunta, meelaha kafeega iyo miirayaasha, bacaha shaaha, digada.
Ha ku darin caanaha, hilibka, dufanka, lafaha, saliidaha, qashinka xayawaanka, ama haraaga cuntada badda ku jirta bacriminta gurigaaga. Waxyaabahani waxay sababi karaan ur xun waxayna soo jiidan karaan cayayaanka compost-kaaga. Sidoo kale, “bacrimiyeyaal” balaastikada laguma dari karo gurigaaga compost waana in loo diraa xarunta bacriminta warshadaha ama qashinka.
Cirbadaha geedaha waxay leeyihiin aashito badan waxayna ku fiican yihiin inaad u isticmaasho mulch geedaha aashitada jecel sida strawberries ama rhododendrons. Cirbadaha geedaha waxay qaadataa waqti dheer si ay si buuxda u bacrimiyaan. Wax ka badan 10% oo raso ah waa inay ahaataa cirbadaha geedka hal mar.
Dambaska qoryaha waa in si taxaddar leh loo adeegsadaa; waxay leeyihiin heer sare oo alkali ah. Si kastaba ha noqotee, waxay bixiyaan potash, nafaqo qiimo u leh beertaada. Kudar dambas kudarso qashinkaaga tiro yar - ugu badnaan rubuc inji hal mar.
Goynta cawska waa inuu ku ekaadaa cawskaaga si uu u ahaado mid caafimaad qaba. Haddii aad soo ururiso oo aad qashin-gashid xoqin caws ah, si fiican ugu qas waxyaabo waaweyn oo "bunni" ah si aad uga ilaaliso inay noqdaan kuwo isku duuban oo ur leh.
Qashinka noocee ah ayaan ubaahanahay inaan sameeyo bacriminta?
Waad iibsan kartaa mid ama waxaad abuuri kartaa taada. Bulshooyin badan oo Massachusetts ah ayaa ka iibiya qashin-qubyada bacrimin ee la kabo kabid, haddaba ka hubi magaaladaada / magaaladaada haddii ay heli karaan kuwan. Haddii kale, waxaad ka iibsan kartaa dukaanka qalabka dhismaha ama internetka. Waxaad sidoo kale ka abuuri kartaa qashin-qubkaaga waxyaabo kala duwan oo ka bilaabma xaarka alwaaxa, qashinka, ama silig gaaska.
Ka waran haddii aan kireysto / aanan u helin meel bannaanka ah oo compostkayga ah?
Vermicomposting waa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay compost-ka gudaha, ama sameynta compost-kaaga si dhakhso leh u burbura. Adoo isticmaalaya gooryaanka gorgorka cas ee aad ka iibsan karto khadka tooska ah, oo aad ku daadinayso qashinkaaga compost xaashi qoyan ama qoyan, dixirigaagu wuxuu ku kobci karaa qashinka compost-ka dhexdiisa. Ka dhig qabow oo qoyan gooryaanka caafimaadka qaba. Waxay qaadataa ilaa 12 toddobaad in compost-ka la dhammeeyo. Riix halkan si aad wax badan uga barato waxyaabaha ku saabsan qorista vermicompost.
Sideen ku ogaan karaa in compostku dhamaaday?
Bacriminta la dhammeeyey waa bunni, jajab, ur dhulka, carro u eg. Waxay qaadataa inta udhaxeysa lix bilood iyo hal sano si raso loo soo saaro alaab dhameystiran, taas oo kuxiran inta dareenka la siinayo. Waa inaadan awoodin inaad aqoonsato walxaha qashinka ah ee galay qashinka. Si aad u isticmaasho ugu fiican, waad ka baari kartaa ka hor inta aanad u adeegsan bacrimin ka fiican oo aad dib ugu celin kartid alaab ka kooban isku-darka si aad u sii jajabto.
Maxaan ku samayn karaa compost dhammeeyey?
Si toos ah ugu shaqee carrada beerta (waxay hagaajineysaa qaab dhismeedka, waxay ku dareysaa nafaqooyin).
Ku daadi cawska si aad cagaar ugu ahaato biyo la'aan.
Ku dabool geedaha agtiisa si aad u quudiso xididdada una yaraato baahiyaha biyaha.
Si toos ah ugu dalbo beerta dhawr jeer sanadkii sidii mulch.
Isku qas carrada dheriga ee baahiyaha beerta gudaha.
Haddii aadan lahayn beer, ugu deeqo iskuul ama beero beel.
Ma kari karaa nafaqeynta xilliga qaboobaha?
In kasta oo hawshu gaabis ku jirto cimilada qabow, waxqabadka bakteeriyada qaarkood wuu sii socon doonaa. Qashinka cuntada wali waa lagu dari karaa ilaa iyo inta lagu daboolayo waqti kasta caleemo ama caws. Waad sii dheereyn kartaa qafiskaaga adoo ku daboolaya balaastik adag oo madow.
Maxaan ku sameeyaa caleemaha aan ku habboonayn qashinkayga?
Si aad u yareysid mugga caleemaha, u saar cowska dushiisa dusha ka hor intaadan ku darin tuubka, ama hoos u qoy oo ku dabool taarbo si aaney u qarxin. Ku dar qashinkaaga bacriminta sannadka oo dhan si aad ugu daboosho qashinka cuntada ama aad u siiso agab "bunni" ah oo ku saabsan cuntadaada lagu nafaqeeyo. Caleemaha iyo qashinka ardaaga (oo aan ahayn qashinka cuntada) si fudud ayaa loogu bacrimin karaa tuulmo iyadoo aan la isticmaalin qashin.
By Emily Susan Gaylord|2019-06-12T07:37:53-04:00Waxaa laga yaabaa 30th, 2019|Composting|
Wax ka qabashada Cunnada Khasaartay Xiligaan
Baro Xeeladaha Yaraynta Qashinka Cuntada iyo Dib u warshadaynta Dugsiyada K-12
Ka Faa'iidayso Cuntooyinkaaga Xilliga Dayrta!
Oktoobar 22nd, 2021 | 1 Comment
Sida loo keydiyo Tamarta & loo yareeyo qashinka kireyste ahaan
10 Go'aannada Sannadka Cusub ee Waara!
Wax-ka-iibsiga onlaynka ah iyo Shakhsi ahaan: keebaa ka cagaaran?
Miisaanka iyo Saamaynta Gorgortanka EcoBuilding
Dib u habeynta Cimilada ee Webinar!
Miyirka Qashinka iyo Quruxda Nadiifka ah
Siyaabo Fudud oo Looga Dhigo Maalinta Dharka Dhaqan-saaxiibtinimo!
CET waxay sii wadaysaa Bixinta Kaalmada Cuntada ee Khasaartay Jasiiradda Rhode iyadoo taageero laga helayo barnaamijka deeqda Racing -ka ee Saacadda 11aad
Baro Sida Loo EcoThrift!
La -qabsashada EcoFellows - Kadib iyo Hadda